«Ping pour tous»: ofisialy ny fiaraha-miasan’ny Henebon sy ny CUA | NewsMada
«Ping pour tous»: ofisialy ny fiaraha-miasan’ny Henebon sy ny CUA
Par Taratra sur 14/01/2022
Nampahafantarina omaly alarobia, tao amin’ny tanànan’i Hennebont ny fandaharam-potoana eo amin’ny fiaraha-miasa iraisam-pirenena, amin’ny «Ping pour tous» na ny ping ho an’olon-drehetra. Mikendry ny fampiroboroboana ny fanaovana tenisy ambony latabatra izy ity ho fanoitra iray eo amin’ny fampandrosoana maharitra eto Antananarivo, renivohitr’i Madagasikara.
Nambaran’i Bruno Abraham, filohan’ny GV Hennebont Tennis de Table, ny maha ofisialy ny fiaraha-miasa eo amin’izy ireo sy ny faritra Bretagne nosoloin’i ¨Pierre Pouliquen, filoha lefitry ny Tanora sy ny fitovian-jo sy ny fanatanjahantena, ankilany sy Kaominina Antananarivo Renivohitra andaniny, tamin’ny alalan’ny talen’ny fanatanjahantena, i Jalal Andriambalo, tonga tany an-toerana.
Zava-baovao, tamin’ity fandaharam-potoana ity, ny fifanakalozana eo amin’ny ireo tanora mpilatsaka an-tsitra-po. Nambaran’i Yann Delaunay, delege jeneralin’ny France volontaires, ny maha zava-dehibe an’izany, izay fisokafan’ny tanora amin’izao tontolo izao. Porofon’izany ireo mpilalao malagasy efatra mianadahy sy ny mpanabe iray miofana ao amin’ny klioba Hennebont amin’izao fotoana izao, izay nanambara ny traikefa azony tamin’ny fandrindrana ny fandaharam-potoana. Nohararaotin’i Vincent Pasquini, tomponandraikitry ny fiaraha-miasa iraisam-pirenena Paris 2024 ny fomba anoratana izao tetikasa izao ao anatin’ny fandaharam-potoana ho an’ny lalao lovain-jafy.